သဘောတူညီချက်လေးခု | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 4, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီညငါသူငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောနေတယ်၊ Jules။ Jules သည် Don Miguel Ruiz နှင့် Don Jose Luis Ruiz တို့၏“ The လေးသောသဘောတူညီချက်” စာအုပ်မှအချို့သောဥာဏ်ပညာကိုပေးခဲ့သည်။
အကြံဥာဏ်အများစုကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်အခြေခံကျသော်လည်းလက်တွေ့ကျင့်ရန်ခက်ခဲသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များသည်ဤကဲ့သို့သောအရာများကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုတွန်းပို့နေပုံရသည်။ ၎င်းသည်လေးခုသာရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအောင်မြင်နိုင်သည်။
သမာဓိရှိစွာပြောဆိုပါ။ မင်းဆိုလိုတာကိုသာပြောပါ သင်ကိုယ်တိုင်ဆန့်ကျင်ပြောဆိုရန်သို့မဟုတ်အခြားသူများအကြောင်းအတင်းအဖျင်းစကားလုံးကိုမသုံးပါနှင့်။ သင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၏တန်ခိုးကိုအမှန်တရားနှင့်ချစ်ခြင်း၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့်သုံးပါ။
အခြားသူများကိုပြုပါအဘယ်အရာကိုမျှသောကွောငျ့သငျတို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူများတွေဘာပြောပြုပါမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်မှန်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်၏စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ သငျသညျအခွားသူမြား၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်လုပ်ရပ်များမှကိုယ်ခံစွမ်းအားတဲ့အခါ, သင်မလိုလားအပ်သောဆငျးရဲဒုက်ခ၏သားကောင်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
မေးခွန်းများမေးရန်နှင့်သင်အမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့အရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့သတ္တိကိုရှာပါ။ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်း, ဝမ်းနည်းမှုနှင့်ဒရာမာရှောင်ရှားရန်အဖြစ်ရှင်းလင်းစွာသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်တခြားသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့။ ဒီတစျဦးသဘောတူညီချက်နှင့်အတူ, သငျသညျလုံးဝသင်၏အသက်တာပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
သင်၏အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်မှပြောင်းလဲသွားခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့်သင်ကျန်းမာနေလျှင်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုသင်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ၊ သင်ကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်ခြင်း၊
စိတ်ကူးယဉ်အကွံဉာဏျ။ ငါနံပါတ် ၁ ကိုချလိုက်ပြီ၊ နံပါတ် ၄ နီးပါးရှိနေတယ်ထင်တယ်။ # ၂ ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတာကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ်။ # 1 အလုပ်အချို့လိုအပ်ပါတယ် ဒီအပေါ်ဖြတ်သန်းများအတွက် Jules မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါလုပ်ဖို့အလုပ်အချို့ရှိသည်။
ဇွန်လ5ရက် 2007 ခုနှစ် နံနက်6နာရီ 29 မိနစ်
အကြံဉာဏ်ကောင်း၊ Doug။ အသုံးဝင်သော အပြုအမူဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်အများစုသည် ရိုးရှင်းပြီး သင်ပြောသည့်အတိုင်း ခက်ခဲသည်။
ဇွန်လ5ရက် 2007 ခုနှစ် နံနက်7နာရီ 20 မိနစ်
Doug စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လိုပါပဲ။ ဖတ်ပြီးပြီလား။ ဝင်ကြေးပေးရတဲ့ စျေးနဲ့ တန်သလား ဒါမှမဟုတ် ဒီနေရာကနေ ရတနာတွေကို သင့်ပို့စ်မှာ အကျဉ်းချုပ် ပြောပြခဲ့ပါသလား။
မြဲမြံစွာ အားထုတ်ရန် ဂုဏ်တော်လေးပါး။ ပြီးတော့ ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်။
ဇွန်လ5ရက် 2007 ခုနှစ် နံနက် 8 နာရီ 05 မိနစ်
ဒီစာအုပ်ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖတ်ဖူးပြီး တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ဘဝပြောင်းသွားတာ၊ အခြေခံသဘောတရားများသည် ရိုးရှင်းသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝများတွင် လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန် (နက်ရှိုင်းစွာ) လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန်မှာ စည်းကမ်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို တိုးတက်စေရန် ဆက်လက်ဆန္ဒရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယခု၊ ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘက်တွင် သေချာပေါက် စိုးရိမ်နေပြီး Doug ၏ ဤဘလော့ဂ်သည် ဘဝ၏ ပိုမိုကျွမ်းကျင်သော/နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘက်သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစက်ဝိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သလောက် ကြီးမားပါသည်။ ပဋိညာဉ်လေးခုကို စာအုပ်အတွင်းတွင် ချဲ့ထွင်ထားပြီး သဘောတူညီချက်တစ်ခုစီအတွက် များစွာနက်နဲသော အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းပြထားသည်။
စာအုပ်၏အစမှာ အနည်းငယ်ဆွဲယူသွားသော်လည်း ၎င်း၏ "အသား" ထဲသို့ ရောက်သည်နှင့် ကျွန်ုပ်သည် ပြောင်းလဲသွားသည်... ထို့နောက် ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒီအခြေခံမူတွေကို လူတိုင်း ကျင့်သုံးနိုင်ရင်၊ အလိုတခုတည်း ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပါ။
ဇွန်လ5ရက် 2007 ခုနှစ် နံနက် 8 နာရီ 32 မိနစ်
ဖတ်ရန်စာအုပ်များအတွက် ကျွန်ုပ်၏စာရင်းထဲတွင် သေချာပါသည် Dawud! ဘလော့ဂ်ရေးဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးခဲ့မိပေမယ့် မင်းပြောတာမှန်တယ် - ဘလော့ဂါတွေအတွက် အကြံဉာဏ်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ။
ဇွန် 5, 2007 မှာ 5: 23 pm တွင်
ဟမ်….အမှတ်2မှာ တကယ်ကြိုးစားရလိမ့်မယ် 🙁
ဇွန် 5, 2007 မှာ 9: 25 pm တွင်
ဒါက အရမ်းခက်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဤနည်းဖြင့် စဉ်းစားရန် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။ သင်မဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်အောင် ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် မင်းငါ့ကို နာမည်ခေါ်တာ ဒါမှမဟုတ် ငါ့ကိုယ်ငါ မကောင်းတာ တစ်ခုခုပြောပြရင် ငါ့ကိုယ်ငါ ဘယ်လိုမြင်သလဲ ဆိုတာ တကယ်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိသင့်ဘူး- ငါ့လူထဲမှာ လုံခြုံနေတယ်ဆိုရင်၊ အဲဒီ့မှာ ပြဿနာ ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လက်ခံရုံနဲ့ မကြိုက်တဲ့အရာတွေကို ပြောင်းလဲပစ်တာထက် သူများရဲ့ခံယူချက်က ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိမြင်ပုံအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိစေတယ်။ သင်ယုံကြည်သောအရာသည် ဖြစ်ထွန်းလာတတ်သည်။ သင့်ကိုယ်သင် အပြုသဘောဆောင်သော အရာများကို တွေးပြီး သင်ကိုယ်တိုင် နှစ်သက်လိမ့်မည်၊ အဆိုးမြင်တဲ့ အရာတွေကို တွေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သဘောကျမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဟုတ်တယ်၊ ငါ Pollyanna'ish လို့စွပ်စွဲခံရတယ်……ဒါပေမယ့် ဒါက ငါ့ဘ၀ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုဖြစ်သလို၊ အထူးသဖြင့် ဒီနေ့ခေတ်မှာ ငါ့ကိုကောင်းကောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုပဲ။ 🙂
ဇွန်လ6ရက် 2007 ခုနှစ် နံနက်4နာရီ 18 မိနစ်
jule အကြံဉာဏ်ကောင်း 🙂
အင်တာနက်မှာ မကောင်းတာတွေပြောဖို့ဆိုတာ တော်တော်လွယ်ပါတယ်။ လိုချင်တာမှန်သမျှ comment box မှာ ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ....
ဘလော့ဂါအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲဆိုတာကို လူတွေကတောင် မတွေးတတ်ကြပါဘူး။ 🙁
“ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကောင်းမြင်တဲ့ အရာတွေကို တွေးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သဘောကျလိမ့်မယ်။ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ အရာတွေကိုတွေးပြီး သင်ကိုယ်တိုင် သဘောကျမှာ မဟုတ်ပါဘူး။”
မင်းရဲ့အကြံဉာဏ်ကို ငါသေချာလိုက်နာပါ့မယ် 🙂
ဇွန်လ6ရက် 2007 ခုနှစ် နံနက်7နာရီ 33 မိနစ်
ဒီစာအုပ်ကို လုံလောက်အောင် အကြံပေးလို့ မရပါဘူး – ဒါဟာ ဖတ်ရလွယ်ကူပြီး သင့်စိတ်ကို ဖြောင့်ဖြောင့်ပြန်ဖြစ်စေဖို့ အခါအားလျော်စွာ ထပ်ဖတ်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အတော်ကြာက ကျွန်တော် “ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဖာထေးမှု” ကို ဖြတ်ကျော်လာချိန်မှာ ပေးခဲ့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ယူဖို့ ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ #2 ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဘာကိုမှ မယူလိုက်ပါနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကူညီခြင်းအားဖြင့် ငါ့အပေါ် အကြီးမားဆုံး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်။
13:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 55
အမှန်တကယ်တွင် သင်သည် သဘောတူညီချက် နံပါတ် (၂) သို့မဟုတ် နံပါတ် (၃) ကို ချိုးဖောက်နေပါက သင်သည် သင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ကင်းလွတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ (သဘောတူညီချက် နံပါတ် ၁)။
တစ်ခုခုကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ယူနေတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ကိုယ်သင် စိတ်ခံစားမှုနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတစ်ခု ပြုလုပ်နေပါတယ်။ ဒါက ပြီးပြည့်စုံမှု မရှိပါဘူး။ သဘောထားကွဲလွဲမှုဖြစ်စေတဲ့ ယူဆချက်တွေကို သင်ဖန်တီးနေတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အပြစ်ကင်းစင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
သင့်စကားလုံး၏ ပြောင်မြောက်သောအသုံးအနှုန်းသည် သင့်အား မှားယွင်းစွာယူဆချက်များပြုလုပ်ရန်လည်း လိုအပ်ပြီး သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရာများကို ယူဆောင်သွားစေနိုင်သော အသုံးအနှုန်းများမပြုလုပ်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
ပထမတော့ ဖတ်ကြည့်တော့ Being Impeccable က တခြားသူတွေထက် ပိုလွယ်တယ်။ ပိုကောင်းတဲ့အချက်တွေကို လေ့လာတဲ့အခါ အသက်ရှင်နေထိုင်မှုသဘောတူညီချက် နံပါတ် ၂၊ ၃၊ ၄ က သင့်ကို ကင်းမဲ့နိုင်စွမ်းကို ရရှိစေတယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒီအကြောင်း အသေးစိတ်ကို မှာနိုင်ပါတယ်။ http://pathwaytohappiness.com/happiness/2007/01/19/be-impeccable-with-your-word/